Nihin Zaanlei Cawbuk Kahdohnak ah SAC Ralhrang5an Thi - TIMES OF CHIN NEWS
CDF-Hakha ခုခံကာကွယ်မှု သတင်း
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ ကျောဘုတ် လုံခြုံရေးဂိတ်အနီးတွင် CDF-Hakha နှင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ သူပုန်တပ်ဖွဲ့များအကြား ၁၇ မေလ ၂၀၂၁ ညနေပိုင်း ၃နာရီခွဲမှ ၇နာရီအကြား ပစ်​ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီး စစ်သူပုန်ဘက်မှ ၅ ​ယောက် ပွဲချင်းသေဆုံးခဲ့သည်။ ရန်သူတပ် စစ်သူပုန်ဘက်မှ လက်နက်ကြီးများ အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း CDF-Hakha ဘက်မှ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ မရှိခဲ့ပါ။
May 17, Hakha
Relchap >>>> Zoh A Dawh Bak Te Lai Hi!
Joshua hi tulio WBA, WBO le IBF world heavyweight champion asi i, Fury hi WBC le Ring magazine title champion asi ve i, hi chungah ai tei paoh nih an taisawm (belt) hi an i chut viar lai, undisputed world heavyweight champion an si lai ti nak asi cu. Heavyweight champion hi kum 2000 hnu ah an um rih lo i tutan ai tei paoh hi undisputed champion an si lai, 1999 kum ah Lennox Lewis nih Heavyweight hiarak lak bal i cuhnu cun ni hin tiang an um rih lo.